Nolol dhammaystiran? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Ciise wuxuu cadeeyay inuu u yimid in kuwa aqbala inay ku noolaadaan nolol buuxda. Wuxuu yiri: "Waxaan u imid si ay nolol faro badan u helaan" (Yooxanaa 10,10). Waxaan ku weydiinayaa: "Waa maxay nolosha rumoobay?" Kaliya markaan ogaanno waxa noloshu u eg tahay si buuxda ayaan u xukumi karnaa ballamada Ciise Masiix runti waa run. Haddaan ka eegno su'aashan aragtida guud ee nolosha jirka, jawaabtu waa mid sahlan oo waxay u badan tahay inay asaas ahaan isku mid tahay iyadoo aan loo eegin meesha aan ku nool nahay ama meesha aan ku nool nahay. Caafimaad wanaagsan, xiriir qoys oo xoog leh, saaxiibtinnimo wanaagsan, dakhli ku filan, xiiso leh, shaqo adag iyo guul, aqoonsi ka yimid kuwa kale, kaqeybgal, noocyo kala duwan, cunno caafimaad leh, nasasho ku filan ama madadaalo madadaalo ah ayaa runtii la xusi lahaa.
Haddii aan badalno aragtideena oo aan nolosha ka eegno aragtida kitaabiga ah, liistadu waxay u muuqan laheyd mid aad u kala duwan. Noloshu waxay ku noqotaa abuuraha hadana in kasta oo bini-aadamku markii hore diideen inay xiriir dhow la lahaadaan isaga, wuu jecel yahay dadka wuxuuna leeyahay qorshe uu ugu celiyo Aabbihiis jannada ku jira. Qorshahan loo ballanqaaday ee badbaadada rabbaaniga ah ayaa naloogu muujiyey sheekada Ilaah kula macaamilay aadanaha. Shaqada wiilkiisa Ciise Masiix ayaa wadada u celisay isaga. Tan waxaa sidoo kale ku jira ballanqaadka nolosha weligeed ah oo wax walba qarisa, oo aan isaga ugu hoggaansanno xiriir aabbe iyo ilmo xiriir dhow leh.
Ahmiyadaha go'aamiya nolosheena waxaa si weyn saameyn ugu leh aragtida masiixiga, iyo qeexitaanka nolosheena dhammaystiran runtii aad ayey u kala duwan tahay.
Xagga sare ee liiskeenna waxay u badan tahay inuu xidhiidh wanaagsan la yeesho Ilaah, iyo sidoo kale rajada nolosha weligeed ah, cafiska dembiyadeenna, is-daahirinta damiirkayaga, dareen cad oo ujeeddo leh, ka-qaybgalka ujeeddooyinka Ilaah halkan iyo hadda, milicsiga rabbaaniga ah Dabeecada aan fiicnayn ee dunidan, iyo sidoo kale ku taabashada dadka kale ee aadanaha ah jacaylka Ilaah. Muuqaalka ruuxiga ah ee nolosha buuxisay waxay ka guuleysataa rabitaanka dhameystirka jirka iyo waxyaabaha.
Ciise wuxuu yiri: "Kan doonaya inuu naftiisa badbaadiyo waa lumin doonaa; Kan naftiisa u lumiya aniga iyo injiilka aawadiis ayaa xajin doona. Ka dib oo dhan, maxay ka qabtaa in dadka laga caawiyo in ay ku guuleysato dunida oo dhan oo ay naftooda dhaawacto? » (Mark 8,35-36). Markaa waad qorikartaa dhammaan qodobbada liiska ugu horreeya naftaada welina waxaad lumin kartaa nolosha weligeed ah - nolosha ayaa lumin lahayd. Haddii, dhinaca kale, aad u ballansan karto waxyaabaha ku taxan liiska labaad naftaada, noloshaada, xitaa haddii aadan u arkin mid kuu duceeya qof kasta oo liiska ugu horreeya, waxaa loo caleemo saari doonaa guul weyn xagga nuxurka ereyga.
Axdigii hore waan ka ognahay in Ilaah xidhiidh dhow la lahaa qabiilooyinka reer binu Israa'iil. Isaguna wuxuu ku xaqiijiyey axdigii uu iyaga kula dhigtay Buur Siinay. Waxaa ka mid ahaa waajibka ah in la xajiyo amarradiisa iyo ducadiisa haddii ay dhacdo addeecid ama habaar lagu heli lahaa caasinimada awgeed (5-aad Mo 28; 3th Mo 26). Barakooyinka loo ballanqaaday inay raacaan u hoggaansanaanta axdiga ayaa inta badan ku dhex jira dabeecadda - lo'da caafimaadka leh, goosashada wanaagsan, guulaha laga gaadhay cadawga gobolka ama xilligii loogu talagalay, roob.
Laakiin Ciise wuxuu u yimid inuu sameeyo axdi cusub oo ku saleysan dhimashadiisa allabari ee iskutallaabta. Tani waxay ku xirneyd ballamo ka durugsan barakeysan jireed ee "caafimaad iyo barwaaqo", oo uu ballan qaaday Axdigii Hore oo lagu soo gabagabeeyey Buurta Siinaay. Axdiga cusubi wuxuu leeyahay “ballamo ka wanaagsan” (Cibraaniyada 8,6), oo ay ku jiraan hadiyadda nolosha weligeed ah, dembidhaafka dembiga, hadiyadda Ruuxa Quduuska ah ee ka dhex shaqeeya, xiriir aabbe-ubad la leh Ilaah, iyo in ka badan. Ballanqaadyadan waxay inoo hayaan ducooyin weligeed ah - ma ahan nolosha oo keliya, laakiin weligood.
“Nolosha dhammays tirtay” ee Ciise ku siinayo waa mid aad uga sii ballaadhan oo qoto dheer nolosha wanaagsan ee halkan iyo hadda. Waxaan dhamaanteen rabnaa inaan ku noolaano nolol wanaagsan adduunkan - qofna si dhab ah uma door bidaayo xanuun inuu wanaagsanaado! Waxaa laga fiiriyaa aragti ka duwan oo meel fog lagu xukumay, waxay cadahay in noloshaadu kaliya ay macno iyo ujeedo ka hesho hodanka ruuxiga. Ciise runtiisu waa run ee eraygiisa. Wuxuu kuu ballan qaadayaa “nolol buuxda oo buuxda” - oo uu hadda ku siinayaa.
Waxaa qoray Gary Moore